Kusimaha Xoghayaha Gaashaandhiga Mareykanka Christopher Miller ayaa… – Hagaag.com
Kusimaha Xoghayaha Gaashaandhiga Mareykanka Christopher Miller ayaa…
Posted on 27 Nofeembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Ku-simaha Xoghayaha Gaashaandhiga Mareykanka Christopher Miller ayaa Jimcaha maanta usoo safray Soomaaliya si uu ula kulmo ciidamada Mareykanka ee halkaas ku sugan.
Booqashadiisa ayaa kusoo beegantay xilli madaxweyne Donald Trump uu ka fiirsanayo in ciidamada Mareykanka laga saaro dalka Soomaaliya.
Miller oo tobankii bishaan uu magacaabay madaxweynaha xilka ka dagaya ee Donald Trump, ayaa khamiistii shalay gaaray Jabuuti iyadoo safarkiisa uu ku saabsan yahay fasaxa mahadnaqa si uu ula kulmo ciidamada dalkiisa.
Socdaalkiisa Soomaaliya ayaa sidoo kale qeyb ka ah dhambaalkiisa mahadnaqa iyo taageerada ah ee uu u dirayo ciidamada Mareykanka ee ka howlgala dalka Soomaaliya, sida uu sheegay afhayeenka Pentagon-ka.
Macluumaadka ku saabsan saldhiga ama ciidamada gaarka ah ee Miller la kulmay lama shaacin. Waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku yimaado Soomaaliya.
Booqashada Miller ayaa imaaneysa iyadoo maamulka Trump uu tixgalinayo yareynta ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya.
Qiyaastii 700 oo askari oo Mareykan ah oo ku sugan Soomaaliya ayaa wada howgallo lagula dagaallamayo argagixisannimada waxayna tababaraan, la taliyaan, gacan ka geystaan taageerada ciidamada Soomaaliya.
AFRICOM ayaa rumeysan in Al-Shabaab ay tahay khatarta ugu badan, ugu awooda badan qaaradda Afrika.
Sanadkii la soo dhaafay, Al-Shabaab waxay ka dambeysay seddex weerar oo lagu dilay ama lagu dhaawacay shaqaale Mareykan ah.